Suudaan: Ciidanka Afgambiyey Bashiir oo ku dhawaaqay laba sano oo ku-meel-gaar ah - Teles RELAY
ACCUEIL » International • SIYAASADDA • Uncategorized Suudaan: Ciidanku waxa ay afduubeen Bashiir oo ku dhawaaqay in laba sano oo isbadal milatari ah
Madaxweynaha Cumar Al-Bashir, oo xukumi jiray Suudaan tan iyo sannadkii 30, ayaa afduubay ciidan xoog leh oo ka soo horjeeda kacdoon shacab ah, waxaana lagu badalay "Golaha" kala-guurka militariga "muddo labo sano ah.
Dhowr waddan, oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Midowga Yurub (EU), ayaa Khamiistii ku booriyay milatariga in ay dhexgalaan dadka rayidka ah ee ku-meel-gaar ah.
Wasiirka Gaashaandhiga Awad Axmed Benawf ayaa loo magacaabay Gudoomiyaha Golaha Ammaanka ee Ku Meel Gaarka ah, kadib markii uu ku dhawaaqay Telefishin Dowladeed "Dhimista Xukunka iyo Xukunka meel Amniga ah ee Hogaamiyaha" Cumar El Bashir.
Kumanaan dibad muujiyeen diidmada abuuritaanka Maxkamadaha Ciidamadu inay soo urureen guurka ka hor xarunta ciidanka inkastoo bilowgii bandow ay ku soo rogeen by Mr. Benawf muddo bil ah in ay 22H00 04H00 maxaliga ah, ama 20H00 GMT 02H00 GMT.
"Walaalkeennu waa inaysan waxba u dhicin," ayuu yiri afhayeen u hadlay AFP, isaga oo go'aansaday in uu ka hor tago bandowgu, halka dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee Sudan, uu bilaabay 19 Diseembar ka dib markii go'aanka dawladu si ay ugu sarreyso qiimaha rootiga, waxay calaamad u tahay dhimashada dadka 49, sida ku cad diiwaanka rasmiga ah.
TV-ga qaranka wuxuu hakiyay barnaamijyadiisa iyo dad badan oo ku soo ururay xarunta dhexe ee Khartoum, kuwaas oo rajeynaya in madaxweynihii xornimadii 75 uu awood u yeeshay tan iyo markii uu xornimada ku jiray 1989.
Ka dib saacado dheer oo sugitaan ah, ayaa Suudaan soo dhoweeyay soo saarista Mr. Benawf. "Xukunka ayaa dhacay!", Chanted kumanaan muwaadiniin ah oo xerada ku jiray tan iyo sabtida horraantii xarunta dhexe ee ciidamada.
Laakiinse farxad bay ku dhacdaa. Si kastaba ha ahaatee, marka laga reebo madaxweynaha, Mr. Benawf wuxuu ku dhawaaqay in la aasaasay "golaha kala guurka millatari" laba sano.
"Dadku ma rabaan guddi millatari oo ku meel gaar ah" laakiin "guddi madani ah" ayaa ku tiri Alaa Salah, ardaygu wuxuu noqday "icon" dhaqdhaqaaqa.
- "Kacaanka Qalabka" -
Ciidanku waxay soo jeediyeen "beddelaad" laakiin waxa ay "rabeen in ay xalliyaan dhibaatada iyaga oo adeegsanaya qalabka ammaanka kaas oo horseedi kara khasaaro weyn," ayuu yiri Benawf.
Airspace ayaa la xiray saacadaha 24 iyo xudduudaha dhulka illaa iyo ogeysiis dheeraad ah, ayuu yiri.
Suudaan badan oo badan, xaaladda siyaasadeed ee cusubi waxay kaliya tahay "nuqul ka mid ah nidaamka", sida mid ka mid ah mudaaharaadku wuxuu ku soo koobay xarun ciidan.
"Xukuumaddu waxay qaadatay afgambi militari iyada oo weli soo bandhigaysa wajiyo isku mid ah (...) oo ay ka soo horjeedaan dadkeennu kor u kaceen," ayaa ka jawaabay jawaabtii Alliance for Freedom and Change (ALC). "Waxaannu ugu baaqaynaa dadkeenna inay sii wadaan fadhiyadooda hore ee ciidamada HQ iyo guud ahaan dalka."
Maraykanka, oo xakameynaya cunaqabateynta Suudaan, ayaa dalku ku liis gareynayo liiska dawladaha taageera "argagixisanimo", ayaa ku boorriyay ciidamada Sudan in ay ku daraan dadka rayidka ah ee ku sugan dawladda.
Midowga Yurub wuxuu sidoo kale ugu baaqay ciidamada in ay si deg deg ah ugu gudbiyaan dadka rayidka ah.
Lix xarumood, oo ay ku jiraan Washington iyo Paris, ayaa ku baaqay kulan degdeg ah oo ka socda Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo ku saabsan Sudan, taasoo dhici karta Jimcihii. Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey Antonio Guterres ayaa ku baaqay in loo wareejiyo Suudaan si loo ixtiraamo "dimoqraadiyada dimuqraadiga" ee dadka.
Xabad joojin ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay dalka oo dhan, oo ay ku jirto Darfur (galbeed), halkaas oo khilaafku ka dhacay in ka badan 300.000 dhintay tan iyo 2003 sida ay sheegtay QM.
Si kastaba ha ahaatee, sanadihii ugu dambeeyay, heerka rabshadaha ayaa si aad ah hoos ugu dhacay Darfur, iyadoo Mr Bashir uu ku dhawaaqay dhowr hanti dhawr ah.
"Waxaan diidnay dhamaanteed + kacaankii kacdoonka + +," ayaa ka jawaabay Abdel Wahid Nur, oo ah hogaamiyaha kooxda fallaagada ee Darfur, "Sudan Liberation Army," oo ku baaqay "dowlad ku meel gaar ah."
In 2009, Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC) oo saldhigeedu yahay Hague ayaa waaran xadhig ah u soo horjeeda Bashir for "dambiyo dagaal" iyo "ka dhanka ah aadanaha" ee Darfur, isagoo intaa ku daray ashtako ee 2010 "xasuuq".
Amnesty International waxay ku baaqday in "gacanta lagu dhigo" Mr. Bashir maxkamada dambiyada ICC ee maxkamadeynta "dembiyada aan la sheegin".
- Maxaabiista Siyaasadeed ee la sii daayay -
Midawga Afrika ayaa ku dhaleeceeyay "gacan-ka-qaadista ciidanka" ee Suudaan, isaga oo sheegay in "aysan aheyn jawaabta ugu haboon ee caqabadaha" dalka.
Dhinaciisa, Masar, oo ah halka ay ciidanku ka xoreeyeen Hosni Mubarak oo awoodda ku leh 2011 adigoo ku hoos jira cadaadiska waddada, ayaa sheegay in ay "kalsooni ku qabaan kartida dadka iyo ciidankeeda" inay hawshan qabtaan. guurka.
Ilaa iyo markii uu dagaalku socday, adeegga sirdoonka ee awoodda badan ee Suudaan (NISS) ayaa sheegay in la sii daayo dhammaan maxaabiista siyaasadeed.
Kassala (bariga), diidmada saraakiisha si ay u sii daayaan maxaabiista lagu hayo halkaas ayaa sababay weerar lagu qaaday goobaha NISS, sida uu qabo markhaati. Weerar la mid ah ayaa lala beegsaday dekedda Suudaan (bariga) by dibad-baxayaasha xukunka ka dhanka ah, sida ay sheegayaan markhaatiyaal.
Xoogaa ayaa sidoo kale lagu soo ururiyey magaalooyinka Madani, Gadaref, Port Sudan iyo Al-Obeid.
Mr. Bashir wuxuu isku dayay inuu ka hor istaago caqabadda isaga oo ka hor inta uusan soo bandhigin xaaladda 22 ee xaalad degdeg ah.
Bashir ayaa tagay, hay'adda samafalka ee caalamiga ah ee Amnesty International ayaa ugu baaqday mas'uuliyiinta cusub in ay "si joogto ah u joojiyaan xilligii xasuuqii iyo dulmiga" ee Suudaan.
Hogaamiyaha mucaaradka Koonfurta Suudaan Riek Machar, oo ah masaafurin Khartoum, ayaa sheegay in uu rajeynayo in shaqada laga eryo madaxweynaha Sudan uusan saameyn ku yeelan doonin geeddi-socodka nabadda ee waddankiisa. Koonfurta Suudaan, oo inta badan Christian ah, ayaa xor ka dhigtay xornimadii Sudan ee 2011, ka dib markii 22 sano oo colaado ah. Waxay ku jirtay Duufaan 2013 bishii December ee dagaalkii sokeeye, oo ay bilowday iskudhacyadii u dhexeeyay Salva Kiir iyo Riek Machar, inkasta oo ay jireen dagaaladii hore ee dagaalka ka dhanka ah Khartoum.
source: https: //information.tv5monde.com/info/soudan-l-armee-renverse-bechir-et-annonce-une-transition-militaire-de-deux-ans-294633